हाम्रो मुलुकमा "समाजसेवा" शब्दले कुनै कालखण्डमा महान अर्थ धारण गरेको थियो । समाजसेवा गर्ने व्यक्तिमा निजी लाभको मनसाय हुँदैनथ्यो । आत्मिक सुखका निम्ति व्यापक परिधिमा आफ्नो तन, मन, धन अर्पित गर्ने कार्यलाई मात्र समाजसेवा ठानिन्थ्यो । यस्तो गहन अभिभारा बहन गर्ने व्यक्तिहरू समाजका विपत्ति र चीत्कारप्रति भित्रभित्रै ब्याकुल भई पीडित वर्गका जीवनमा राहतका किरण छर्न स्वस्फुर्त रूपमा अग्रसर हुन्थे । तिनका यस्ता निःस्वार्थ सेवाले धेरैको जीवनयात्रा सुगम हुन्थ्यो । दीनदुःखीका कष्ट र पीडालाई हर्षमा रूपान्तरण गर्न पाउँदा समाजसेवी पनि निकै पुलकित हुने गर्थे । यही कारण "समाजसेवा" र "समाजसेवी" शब्दको ठूलो गौरव थियो ।
अहिले यी शब्दको अर्थमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । परम्परित रूपमा महान् मर्यादा बोकेका यी शब्दहरूको अर्थ विस्तार हुँदै प्रयोक्ताको बुझाइ र कार्यशैलीमा ठूलो अन्तर आएको छ । आज नेपालका हरेक व्यक्ति आफूलाई समाजसेवी र आफ्नो व्यवसायलाई समाजसेवाको जलप लगाउन आतुर छन् । शब्दको ध्वन्यात्मक मर्मलाई छाडेर प्रदर्शनपरक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिले एकातिर यसको गरिमामा सङ्कुचन ल्याएको छ भने अर्कोतिर वास्तविक सेवामार्गमा लाग्नेहरूका चरित्रप्रति अविश्वास बढाएको छ । समकालीन सन्दर्भमा नेपालमा को समाजसेवी छैन ? वडास्तरमा राजनीति गर्नेहरूदेखि प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्नेले समेत आफ्नो पेसालाई समाजसेवा भन्न हिरिक्क हुन्छन् । राजनीतिजस्तो महत्त्वाकाङ्क्षामा आधारित अर्को कुन क्षेत्र होला ? प्रतिद्वन्द्वीलाई येनकेन प्रकारले हराएर सत्तासीन हुने अर्काे कुन दौड होला ?
समाजसेवाको राजपथमा आफूमात्र हिँडेको हकदाबी गर्ने नेपालको अर्को समूह NGO र INGO छ । यो तप्काले सरकारी तलब-भत्ता नखाएकै आडमा आफूलाई समाजसेवी ठान्छ । अत्यधिक कागजको घोडा चढ्ने यो समूहले जनताको करूण चित्र प्रस्तुत गर्दै दातृ निकायबाट पेटिकापेटी डलर भित्र्याउँछ । सर्वप्रथम आफ्ना लागि राजधानीमा भव्य अफिस, गाडी र आकर्षक तलब-भत्ताको "भूरसी" गर्छ । स्थानीय स्तरमा अर्धस्वयंसेवक नियुक्ति गर्छ, त्यसमार्फत लक्षित वर्गको तथ्यांक संकलन गराउँछ । झल्याकझुलुक फोटो खिचाउँछ र त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन निर्माण गरी दाताको रकम शतप्रतिशत सदुपयोग भएको घोषणा गर्छ र आफ्नो कर्मकाण्डलाई विराट समाजसेवाको दृष्टान्त ठान्छ । यहाँ कोभन्दा को कम छ र ? सम्मान र सम्पत्तिको एकमुष्ट भोग गर्न कसलाई रहर हुँदैन ? त्यसैले ज्वलन्त समाजसेवा गरेको ठोकुवा गर्ने वर्गहरू च्याउझैं उम्रने क्रम जारी छ । यस्तो वर्गमा "ट्रस्ट" वा "प्रतिष्ठान वर्ग" पनि अग्रस्थानमै छ । यो वर्ग जीवनभर राज्यका उच्चपदमा बसेर अवाञ्छित तरिकाले द्रव्य संकलन गर्छ । पेसामा रहँदा-बस्दाको सम्मान अवकाशप्राप्त जीवनमा नपाइने हुँदा उसलाई भित्री रिक्तताले सताउन थाल्छ । जवानीमा गरिएका दुष्कर्महरूले आन्तरिक रूपमा पोल्न थाल्छन् । छोराछोरी सबै आ-आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेको हुँदा यो वर्गले आफ्नो धनसम्पत्ति व्यर्थ महसुस गर्न थाल्छ । यस्तै मानसिक सन्तापका बीचमा यो वर्गले आफ्ना नाममा कोष, गुठी, प्रतिष्ठान खडा गर्छ र दुई-चारजना आफ्ना भजनमण्डलीलाई पुरस्कृत गर्छ । यसकै आधारमा उसले आफूलाई समाजसेवीको फेटा लगाउन थाल्छ । यो खालको समाजसेवा गर्ने वर्गमा सरकारी, गैरसरकारी कित्ताका भूतपूर्व कर्मचारी तथा व्यापारीहरू पर्छन् ।
हालैका समयमा नेपालमा अर्को नयाँ पङ्क्ति समाजसेवाका क्षेत्रमा तामधामका साथ सक्रिय छ । यो पङ्क्तिले आफूले मात्र सच्चा सेवा गरेको फुटानी गर्छ । ईश्वरलाई आफ्नो सेवाको साक्षी बनाउने यो वर्गले धेरैजसो शान्ति, अहिंसा, मानवता, अध्यात्म र सेवाको चर्को कुरा गर्छ । सप्ताह पुराण, भजनकीर्तन र प्रवचनजस्ता अनौठा गतिविधिमार्फत यो समूहले स्वदेश-विदेश, स्वर्ग-मत्र्य-पाताल चारैतिरबाट खुल्लमखुल्ला भगवान्का नाममा चन्दा माग्छ । इहलोक, परलोक सुधार्ने एकमात्र उपायका रूपमा दानको महिमा छाँट्छ । त्यसकै आधारमा जग्गा, सुन, नगद झार्छ, विभिन्न प्रकारका सदस्यता वितरण गर्छ । त्यसबापत संकलित रकमको दसांश सानातिना मठमन्दिर, धारापानी र स्कुल मर्मतमा खर्च गर्छ र थोक रकमबाट आफ्ना पूर्वज एवं आफ्नै नाममा "धाम", "आश्रम", "पीठ", "केन्द्र" स्थापना गर्छ । धर्म र सेवाको कुरा गर्ने हुँदा यो समूहले कहिल्यै आयकर तिर्नु पर्दैन । दाताले आफूले दिएको दानप्रति मोह त्याग्ने भएकाले आयव्यय पनि कहिल्यै पारदर्शी बनाउनु पर्दैन । बाहिर-बाहिर त्याग-संयम र सादगीको बखान छाँट्ने यो समूह आफू भने गुप्त रूपमा भव्य भोगमा लिप्त रहेको हुन्छ ।
संगठित रूपमा देखिने समाजसेवाका यस्ता स्वरूपहरूले आम व्यक्तिमा "समाजसेवा" शब्दप्रति आकर्षण बढेको छ । यसैका माध्यमबाट "नामदाम" एकैसाथ पाइने हुँदा व्यक्तिस्तरमा समाजसेवी बन्ने क्रम बढ्दो छ । टोलसुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति, स्थानीय क्लबका सदस्यहरूसमेत अहिले आफूलाई समाजसेवीको तहमा राख्न मरिहत्ते गर्न थालेका छन् ।